Raharaham-pirenena: Tsara ny fanazavana nentin'ny Filoham-pirenena
dimanche, 06 octobre 2019 22:55
Misaotra ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nitondra fanazavana tamin'ireo teboka maromaro momba ny fiainam-pirenena. Tsara ny toy ireny, tsy nisy loha-hevitra nodiana tsy hita, izay isaorana ireo mpanao gazety telo ihany koa, feno fasahiana nametraka ny fanontaniana.
Na mitovy hevitra na tsia avy eo, ny zava-dehibe dia fantatra ny hevitry ny Filoham-pirenena, hita ny lalana tiany hombana.
Nankafiziko manokana ilay fanentanana nataony ny rehetra hiaraka ampandroso ny Firenena, ny fitadiavana fitoniana, nefa koa mahazaka tsikera entina ampandrosoana, raha misy ny tsy mety, arahina soso-kevitra.
Miangavy ireo mpiara-miasa aminy aho mba hanao fomba fiteny toy ireny, atsaharo ny fiantsiana, izay mety mampisaraka.
Ianareo no mitondra, miaraka amin'ny filoha, izay izahay olom-pirenena no manakarama anareo, ka aoka mba ho mendrika sy modely. Tsy misy miady ny toeranareo, fa hajao izahay, fa aza anaovana vava sy fihetsika feno fiantsiana na ramatahora.
Tsy misy manana tombotsoa amin'ny ady lahy sy fifanenjehana.
Tsy misakana kosa ny fisintonana lakolosy fanairana raha misy ny tsy mety.